अधिकांश युवतीहरूले यौनका बारेमा सोंच्ने यी ८ कुरा « Naya Bato
प्राय युवकहरु सोच्ने गर्छन्, युवतीहरु यौनको बारेमा कल्पना गर्दैनन् होला । तर यो गलत हो , एक अध्ययनले बताए अनुसार हरेक युवतीले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उत्ताउलो खालको यौन अनुभव गर्न चाहन्छन् भन्ने तत्थ सार्बजनिक भएको छ ।
३.चरम सन्तुष्टिको चाहनाः
के हो सेक्स कुलत, यस्तो वानीलाई कसरी परिवर्तन गर्ने ?
सेक्सको चरम आनन्द लिने तरिका
यसरी लिनुहोस् बुढेसकालमा सेक्सको मजा -यौन मनोबिज्ञ करुणा कुँवर
मानिसले किन गर्छ पशुसँग सेक्स ? यस्ता छन् कारण
खुल्यो महिलाको यौन सन्तुष्टीको नयाँ रहस्य, यस्तो छ तरिका